Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamada Sare ee Britain oo Ka Go’aan Qaadanaysa Hubka Sacuudiga Laga Iibiyay.
Maxkamada Sare ee Britain oo Ka Go’aan Qaadanaysa Hubka Sacuudiga Laga Iibiyay.
Maxkamadda sare ee dalka Britain (UK) ayaa go’aan ka gaadhaysa sharcinimada in dawladdu ay hub ka iibiso Boqortooyada Sacuudiga.
Maxkamadda ayaa go’aamin doonta bal in dawladdu ay ku guuldaraysatay joojinta hubka laga iibiyo Sacuudiga oo dagaal ka wada dalka Yemen iyo inkale. Qaramada Midoobay (QM) ayaa sheegtay in duqaymaha dhanka cirka ah ee Sacuudigu uu ku bartilmaameedsanayo jabhadaha Xuutiyiinta ah in ay ku dhinteen kumannaan shacab ah.
Hay’adda ka soo horjeeda in hubka laga ganacsado ee The Campaign Against the Arms Trade oo dacwadan keentay maxkamadda ayaa sheegaysa in dalka UK ay meel uga dhacday qawaaniinta xuquuqda aadanaha. Qalabka Militari ee Sacuudiga laga iibiyay waxaa ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ee dagalka oo noocyadoodu kala yihiin Typhoon iyo Tornado iyo waliba bambooyinka meelaha fog laga hago.
Ganacsigaas ayay shaqooyin ka heleen kumannaan injineer oo reer Britain ah iyadoo dalkuna uu ka faa’iiday balaayiin doolar. Sacuudi ayaa taageerayay dawladda ay dunidu aqoonsan tahay ee Yemen tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalkaas sannadkii 2015-kii.
Jabhadaha Xuutiyiinta ah oo taageersan madaxweynihii xilika laga tuuraay ee Cali Cabdallah Salax ayaa 2014-kii billaabay weerar horseeday in madaxweyne Cabdurabah Mansuur Hadi uu dalka isaga cararo in muddo ah. Intaas wixii ka dambeeyayna boqortooyada Sacuudiga iyo siddeed dal oo kale ayaa billaabay duqaymo ay xukunka dib ugu celinayaan Hadi.